Uhlaka LwezoMthetho | Local Government Action
Home » An Activist's Guide
Kubalulekile ukuthi izishoshovu ziqonde ukuthi imithetho isungulwa futhi iphoqelelwe kanjani eNingizimu Afrika.
Ulwazi oluqukethwe lapha luzokusiza ngokuthi uqonde amalungelo akho uma ubhekene nohulumeni basekhaya.
Kuyo yonke le webhusayithi imithetho ibhalwe ngamagama atshekile futhi okukuxhumananisa nemithetho kuhlinzekwe lapho kubhalwe khona ukuthi ‘IMITHETHO EMQOKA”.
UYINI UMYALELO WOMTHETHO
ENingizimu Afrika, awukho uhulumeni noma umuntu ongaphezu komthetho. Uhulumeni uwonke, okubandakanya uhulumeni wasekhaya, kumele ulandele uMthethosisekelo kanye nemithetho ephasiswa uhulumeni. Lokhu kwaziwa ngokuthi umyalelo womthetho (isigaba 1(c) kanye nesigaba 2 soMthethosisekelo) futhi kuchaza ukuthi uhulumeni, osopolitiki kunoma amaphi amazinga bangaphoqelelwa ukuthi bahloniphe umthetho.
Uma uphosela uhulumeni wasekhaya inselelo ngokuthile okwenzile noma ukunqaba ukwenza okuthile, kunemibuzo emibili okumele uyibuze:
Omuphi umthetho onikeza uhulumeni igunya lokwenza okuthile?
Ngabe uhulumeni uwulandelile na umthetho?
Izinhlaka ezintathu zikahulumeni – owasekhaya, owesifundazwe kanye nokazwelonke – futhi zonke zinikezwe amandla umthethosisekelo. Uhlaka ngalunye kumele luziphasisele imithetho yalo endaweni oluphethe kuyo.
UMthethosisekelo: lo umthetho omkhulukazi eNingizimu Afrika futhi unamandla phezu kwayo yonke eminye imithetho engahambisani nawo. Lokho kubandakanya uSomqulu wamaLungelo aBantu oqinisekisa amalungelo abo bonke abantu eNingizimu Afrika.
Izincwadi zeMithetho noma uMthetho: le imithetho evotelwe izinhlaka ezikhethiwe okubandakanya umkhandlu kamasipala, isishayamthetho sesifundazwe noma iPhalamende lakuZwelonke futhi ibizwa nangokuthi imithetho. UMthetho omqoka olawula ohulumeni basekhaya uMthetho weziNhlaka zoMasipala.
IMithetho yoMasipala: le imithetho esungulwe ohulumeni basekhaya. Kumele iphasiswe ngamavoti amaningi emkhandlwini kamasipala. Ngaphansi koMthethosisekelo, umphakathi kumele unikezwe ithuba lokubuyekeza nokuphawula ngemithetho kamasipala ngaphambi kokuba ivotelwe umkhandlu kamasipala. Umasipala ngamunye ushicilela imithetho kamasipala bese ibizwe ngokuthi uMgomo kaMasipala.
Izinqumo: lezi izinqumo zomkhandlu kamasipala ezinqunywe ngomavoti amaningi. Ezinye izinqumo, njengezokuhlakazwa komasipala, zidinga ukuvotelwa izingxenye ezimbili kwezintathu ukuze ziphasiswe.
Izinqubo ezimisiwe nemithetho emisiwe: lokhu kumayelana nendlela umkhandlu kamasipala oqhuba ngayo umhlangano, ukuthi umphakathi awuvumeleki ukuthi uthamele imihlangano makunjani, iqhaza likasomlomo kanye nokuthi izikhalo zilawulwa kanjani.
Inqubomgomo kamasipala: inqubomgomo kamasipala, isinqumo esithathwe umkhandlu kamasipala kanye nemithetho kamasipala, kuyabophezela ngokomthetho. Isibonelo salokhu inqubomgomo yobuhlwempu, inqubomgomo yezikweletu nokuqoqwa kwemali yazo, inqubomgomo yokukhokha izimali ezimisiwe, njll. Izinqubomigomo azigunyazwa ngokwesinqumo esivotelwayo noma imithetho kamasipala yomkhandlu kamasipala akuphoqelekile ukuthi ibe isibopho somthetho okusho ukuthi ayiphoqelelekile njengomthetho.
Imithethonqubo, izinhlaka kanye nemihlahlandlela: lokhu kuyimithetho emincane egunyazwe izikhulu eziphezulu. Uma sekubhekwa uhulumeni wasekhaya, lokhu kuchaza ukuthi umkhandlu kamasipala, usodolobha kanye/noma ikomidi eliphethe. Imithethonqubo kumele igunyazwe imithetho noma imithetho kamasipala, ukuze ibe umthetho ngokuphelele.
Ngokwesigaba 32 nesigaba 162(3) soMthethosisekelo kanye nesigaba 15(3), nesigaba 25(4)(a), nesigaba 46(4)(a) kanye nesigaba 84(3)(b) soMthetho weziNhlaka zoMasipala, imithetho kamasipala, imithetho nezinqubo ezimisiwe kumele umphakathi ukwazi ukuyithola. Cela ihhovisi likamasipala wakho ukuthi likunike ikhophi yemithetho kamasipala, inqubomgomo, imithetho noma izinqubo ezimisiwe ozidingayo.
Izinkantolo: ngezinye izinkathi izinkantolo ezithatha isinqumo sokuthi le mithetho kumele isebenze kanjani. Lokhu kubizwa ngokuthi ukucutshungulwa ngokwamajaji noma ngokomthetho futhi yikho okwenza uMthethosisekelo ube umbhalo ophilayo. Kunamazinga ahlukene ezinkantolo zaseNingizimu Afrika, kusukela ezinkantolo zezimantshi, kuya ezinkantolo eziphakeme, kuye enkantolo enkulu okudluliswa kuyo amacala kanye neNkantolo yoMthethosisekelo. Inkantolo yoMthethosisekelo iyinkantolo yokugcina kuzo zonke izigaba zomthethosisekelo – yiyo ethatha izinqumo zokugcina mayelana noMthethosisekelo kanye noSomqulu wamaLungelo aBantu. Amacala aseNkantolo yoMthethosisekelo achaza aphinde asungule umthetho futhi achaza amalungelo ethu. Kunezindlela ezihlukahlukene zokuthola imithetho oyifunayo. Ungaya ehhovisi likamasipala wasekhaya bese ucele amakhophi emithetho kamasipala egcwele, nemithethonqubo kanye nezinqubomigomo. Konke lokhu kumele kutholakale kwiwebhusayithi kamasipala wakho..
Okumele kwenziwe uhulumeni wasekhaya
Umgomo wokuziphatha weKhansela
Ilungelo lakho lokwazi
Enza uhulumeni wakho usebenze
Kunezindlela ezihlukahlukene zokuthola imithetho oyifunayo. Ekhasini lezinsiza lakule webhusayithi sicaphune imithetho emqoka kanye nohla lwemithetho kanye namakheli amanye amawebhusayithi azokusiza ukuze uthole umthetho owufunayo.
Ungaya nasehhovisi likamasipala wasekhaya bese ucele amakhophi emithetho kamasipala egcwele, nemithethonqubo kanye nezinqubomigomo. Konke lokhu kumele kutholakale kwiwebhusayithi kamasipala wakho.
UMthetho weziNhlaka zikaMasipala